DVDStyler: Ngwa na obe-ikpo okwu maka ihe okike DVD na ide ederede | Site na Linux
N'agbanyeghị ihe Usoro njikwa anyị na-eji, niile n'oge ụfọdụ anyị chọrọ ma ọ bụ mkpa mepụta DVD ọkachamara-na-achọ, ya bụ, na mkpuchi na menu, n'etiti ihe ndị ọzọ na / ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ya mere, n'oge a ka anyị ga-atụle DVDStyler.
DVDStyler bụ free na multiplatform ngwa maka DVD okike na edemede. Nke na-enye anyị ohere ịmepụta DVD na nke ahụ ọkachamara anya a na-achọkarị ya.
DVDStyler bụ ngwa onye mmepe ya kwụsịrị, ya bụ, ya ọhụrụ anụ version E bipụtara na 19 / 05 / 2019. Mana ọ ka bụ nsụgharị kwụsiri ike, tozuru etozu (arụ ọrụ / arụ ọrụ) ma dị n'ọtụtụ ebe nchekwa nke GNU / Linux Distros. Kedu ihe kpatara na enweghị ike iwepụ ya dị ka ngwa bara uru maka mmadụ niile.
Ihe omuma atu ozo nke ulo oru ma obu ihe ochie nke ka diri ndu di Ihe nkiri DVD, nke anyị kwurula na mbụ, ọtụtụ afọ gara aga. Ya mere, anyị na-akpọ ndị nwere mmasị ka ha hụ akwụkwọ anyị gara aga metụtara Ihe nkiri DVD ma ọ bụ gaa ozugbo na njikọ weebụsaịtị gị na Isi mmalite, nke ka dị.
"DVDisaster bụ ngwa ọrụ emere iji gbakee data site na ngwa anya anya, ma ha bụ CD, DVD ma ọ bụ Blu-Rays. Ọ bụghị naanị na ọ na-enye anyị ohere iji weghachite ozi, anyị nwekwara ike ịlele ọnọdụ nke diski ahụ, na eserese nke na-akọwa ọnọdụ ha." Naghachi data site na CD ma ọ bụ DVD gị na Dvdisaster
1 DVDStyler: Egwu na multiplatform App
1.1 Gịnị bụ DVDStyler?
1.2 Ozi dị mkpa
DVDStyler: Egwu na multiplatform App
Gịnị bụ DVDStyler?
"DVDStyler bụ free, obe-ikpo okwu DVD authoring ngwa na-enyere video enthusiasts ike ọkachamara-na-achọ DVD. Ọ bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ekesara n'okpuru GNU General Public License (GPL)."
N'ihi ya, na DVDStyler anyị nwere ike site na mfe ọkụ video faịlụ DVD maka mfe na ngwa ngwa playback ọ bụla DVD ọkpụkpọ ruo ike menu DVD menu anyị uto na mkpa jikwaa e dere ọdịnaya.
Ọ dị mfe iji wee bịa na ngwaọrụ dị mfe yana atụmatụ dị elu.
Enwere ike iji ya mepụta ma gbaa vidiyo vidiyo na DVD na menu mmekọrịta mmekọrịta.
Enye ohere e kere eke nke DVD preview menus, bọtịnụ na ọrụ. Na mgbakwunye, ọ na-enye gị ohere ịhazi igodo na ngbanwe nke bọtịnụ ọ bụla ma ọ bụ ihe eserese etinyere na menus mepụtara.
Ọ na-akwado ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isi vidiyo na koodu ọ bụla iji mepụta ma dekọọ faịlụ ọ bụla. Kpọmkwem, ọ dakọtara na AVI, MOV, MP4, MPEG, OGG, formats WMV, n'etiti ndị ọzọ. Ọ na-enyekwa nkwado maka AC-3, DivX, XviD, MP2, MP3, MPEG-2, MPEG-4, n'etiti ọdịyo na vidiyo ndị ọzọ.
Ọ nwere nkwado nke ọtụtụ ndị nrụpụta. Ọzọkwa, edere ya na C / C ++ ma jiri wxWidgets graphic Toolkit nke na-eme ka ikpo okwu nọrọ onwe ya. Ihe kpatara, ọ bụ multiplatform (GNU / Linux, Microsoft Windows na MacOS).
Maka ozi ọzọ, ị nwere ike ịnweta ukara website nke DVDStyler en Isi mmalite. Mgbe, kpọmkwem iji mụta otu esi eji ya, ịnwere ike ịnweta ya ukara nkuzi na Spanish na ịpị ọzọ njikọ.
Similarfọdụ ihe na-emeghe ma na-emeghe nwere ike ịbụ:
Mepee DVD Mmepụta
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «DVDStyler», ngwa na-atọ ụtọ ma dịkwa ugbu a na ngwa eji jikwaa okike na edemede nke DVD anyị; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » DVDStyler: Ngwa na multiplatform ngwa ngwa maka okike DVD na ide edemede
Ọ dị ezigbo mma. Afọ ole na ole gara aga ọ gaara adịrị m mma, mana ugbu a, ana m edekọ ihe ole na ole na DVD / Blu-Ray. A ka ga na-ele ya anya. Daalụ maka isiokwu na nkwanye.
Ọfọn, ọ dịghị mkpa ka ịdekọ na CD / DVD / BluRay, ebe ọ bụ na ngwa a nwere nhọrọ nke ịchekwa ihe emere na .iso usoro; Nke a bụ nke m na-ezigara ndị ahịa m mgbe ha zigara m ka m tụọ foto na vidiyo ka e wee lee ha na kọmputa ha (na mbụ na DVD ọkpụkpọ).
Zaghachi ka willalfangom
Ekele, willalfangom. Daalụ maka ikwu okwu gị na onyinye maka isiokwu a.
Ekele, eJoagoz. Daalụ maka okwu gị ma obi dị anyị ụtọ na ị masịrị ngwa a kwuru.
Dogecoin Slumps, Falls 23% Ka Elon Musk na-akatọ DOGE Ndepụta